Pousada RiiA Suite 04 Maragogi AL - I-Airbnb
Pousada RiiA Suite 04 Maragogi AL
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguRiva
Ukubhukisha kwe-Airbnb kuphela
Iza kuvunyelwa (ayinyanzelekanga) kwindawo enepuli ukususela ngoAgasti 2022
Iyi-1,500square yeemitha eziluhlaza ezikwiimitha eziyi-200 ukusuka elwandle.
Singabantu abathandanayo abafuna ukushiya ilifa emhlabeni baze basebenze elunxwemeni, abafuna ukuzisa into eyahlukileyo kulo mmandla.
SiseBarra Grande beach eMaragogi, kufutshane neepuli zendalo, iivenkile zokutyela kunye neCamino de Lí.
Indawo enamahlathi amakhulu eneendawo ekwabelwana ngazo, ijingi, iihammokhi zokuphumla, amadama okuqubha abantu abadala nabantwana, izoso kunye neendawo zokupaka.Isidlo sethu sakusasa esimnandi kunye nezonka ezisandula ukwenziwa, iikeyiki, i-tapioca kunye ne-coalho cheese sele zibandakanyiwe kwireyithi.
Emagumbini sinomabonakude kuphela ngeNetflix kunye neGloboplay, i-air conditioning eyahlulahlulayo, iWifi, kunye neminibar enamanzi, isoda, ibhiya, i-snacks kunye nezinye izinto ezifumanekayo ukuba zithengwe.Igumbi leTV eliphambili liphantsi kokulungiswa ukuze wonke umntu anxibelelane kwiiseshoni zemuvi okanye mhlawumbi abukele imidlalo kunye.
Kwaye sikwanaso isiginci, imidlalo yebhodi, ithala leencwadi kunye ne-100Mbs wifi ekhoyo. Kufuneka kucelwe ilinen yokulala xa kuyimfuneko.Asiboneleli ngezinto ezinjengeeambrela, izitulo kunye neetawuli eziza kusiwa elunxwemeni, kodwa kukho iindawo ezininzi ezikufutshane ezibonelela simahla.
1 ibhedi elala abantu ababini, iibhedi ezilala umntu omnye eziyi-2, Ibhedi ekuthiwa yi-hammock eyi-1
4.97 · Izimvo eziyi-153
Siziimitha ezingama-200 ukusuka kulwandle lwaseBarra Grande, eMaragogi. Okwangoku ikhula ngokukhawuleza, ummandla uneendawo ezininzi zokwamkela, iimarike, iikhemesti kunye neeresityu, iimitha ezingama-500 kude nesanti elwandle, eyaziwa ngokuba yiCaminho de Moisés.
Umbuki zindwendwe ngu- Riva
Izimvo eziyi-1 074
Ngabantu abalungileyo kuphela abamkelekileyo.
Ingqwalasela yethu ikubantu abanxibelelana nabo abafuna ukutshintshiselana ngamava, ukusebenzisana nezinye iindwendwe kwaye kukhethwa ukuba bashiye ilifa. Sisoloko sifumaneka ukukunika ulwazi kunye neengcebiso malunga neendawo ezipholileyo zokutya okanye ukuhamba.
Ndichitha phantse yonke imini enikezelwe kwiRiiA.
Ingqwalasela yethu ikubantu abanxibelelana nabo abafuna ukutshintshiselana ngamava, ukusebenzisana nezinye iindwendwe kwaye kukhe…